एमाले बैठकमा हंगामा, दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीलाई कारवाही गर्न तेस्रो धारको माग ! – GALAXY
एमाले बैठकमा हंगामा, दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीलाई कारवाही गर्न तेस्रो धारको माग !
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृती प्रतिष्ठानमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमालेका दुई पक्षबीच कुरा नमिलेपछि लफडा भएको हो ।
तेस्रो धारले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएपछि बैठमा लफडा भएको हो । तेस्रो धारका केही केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अध्यक्ष ओलीलाई कारवाही गर्न मिल्ने की नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।
‘पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा दुई–दुई पटक विघटन गर्नेलाई कारवाही गर्न मिल्छ की मिल्दैन् रु असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दुई पटक नै पुनस्र्थापना गर्यो ।
के संविधान र लोकतन्त्रको भावना विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्दैन् असंवैधानिक कार्य गर्ने हाम्रा अध्यक्ष ज्यू कति पटक उठबस गर्नुपर्छ । बैठकमा तेस्रो धारका एक नेताले प्रश्न गरे । तर पछि सो बिषयमा पनि छलफल गर्ने कुरा भएपछि बैठक अघि बढेको बताइएको छ ।